Kolari Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - i-Finland | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Kolari
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Kolari
Indlwana enhle ye-log eduze nomfula i-Äkäsjoki, i-Kolari, iqashwa. Indlwana ilungele ukushushuluza eqhweni, isibonelo, njengoba ibanga eliya e-Äkäslompolo liqhele ngamakhilomitha angu-19 kuphela. Indlwana inemibhede eyisithupha; ikamelo lokulala linombhede we-140 cm futhi igumbi lokuphumula line-sofa ezimbili ezivulekile zibe imibhede elala abantu ababili. Ngemva kosuku lokuphuma kuhle ukufudumala ekhishini phambi kwendawo yomlilo. Ukuhlanza kokugcina kuwumthwalo womqashi.
Amasevisi athandwayo ase- Kolari ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Kolari